Amporisihan’ireo Manampahaizana Momba Ny Aterineto Rosiana Ny Politikan’ny “Tena Anarana Marina” Amin’ny Fanehoankevitra Amin’ireo Tranonkalam-Baovao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Mey 2016 17:28 GMT
Raha misy anarana ireo fanehoankevitra amin'ny aterineto, afaka mizaka tanteraka ny vesatry ny andraikitra ireo mpisera, hoy ireo Rosiana manampahaizana amin'ny aterineto. Sary navoakan'i Tetyana Lokot.
Mety ho takiana hisoratra anarana amin'ny vavahadin-tseraseram-panjakana mba ho afaka mandefa fanehoankevitra amin'ny haba-tranonkalam-baovao ireo Rosiana mpisera amin'ny aterineto ato ho ato .
Araka io volavolanà politika vaovao io, dia takana hisoratra anarana amin'ny Rafitra Rosiana Miray momba ny Famantarana sy ny Fanamarinana (ESIA) ireo mpisera, hetsika izay hamindra ny andraikitra noho ny fanehoankevitra ho amin'ny mpisera ary hanala izany amin'ireo haino aman-jery mpampita vaovao. Hanamaivana ireo tranonkalam-baovao amin'ireo vesatra sasany amin'ny fanarahana maso sy fandrindràna ny fanehoankevitra ao amin'ny tranonkalany izany. Fa mety handràra ihany koa ireo mpamaky tsy handefa fanehoankevitra tsy misy anarana .
Mitaky ny fanovàna ny lalàna Rosiana manan-kery ny fampidirana fanovàna andraikitra tahaka izany. Amin'izao fotoana izao, ireo famoahambaovao voarakitra ofisialy no tazonin'ilay didy navoakan'ny Fitsarana Tampony Rosiana tamin'ny 2010 ho tompon'andraikitra amin'ny fanehoankevitra rehetra avelan'ireo mpamaky azy ao amin'ny pejiny na ny sehatra nataony hifampiresahana, isan'izany ireo izay mandrisika ny fankahalana ara-tsosialy, nasionaly na ara-pivavahana, raha toa ka mbola azon'ny mpamaky jerena ireo fanehoankevitra ireo taorian'ny fangatahan'ny Roscomnadzor nitakiana ny hamafàna na hanesorana azy ireny. Mila fitsipidalàna vaovao ny fanilihana ny tsiny ho any amin'ireo mpisera voasoratra anarana.
Ilay hetsika fanoratana ny anaran'ireo mpaneho hevitra dia hevitra manokana niainga avy tamin'ny Ivontoerana ho Fampiroboroboana ny Aterineto (IDI), masoivoho tsy miankina amin'ny fanjakana, tarihan'i German Klimenko mpanolotsainan'i Putin amin'ny resaka aterineto sady ampahany amin'ny “tondrozotra” ho famoiroboroboana ny aterineto nomanin'ilay masoivoho ho an'ny Filoha Rosiana Vladmir Putin. Horesahan'ireo manampahaizana avy ao amin'ny Ministeran'ny Serasera, ny mpanara-mason'ny fanjakana Roscomnadzor, ny solontenan'ny indostria, ny mpanao lalàna sy ny haino aman-jery mpampahalala vaovao ao amin'ny Duma-mpanjakana (Parlemanta Rosiana ) amin'ny tapaky ny volana May io fanapahankevitra io.
Amin'izao fotoana izao, Rosiana maherin'ny enina amby roapolo tapitrisa no efa voasoratra anarana ao amin'ny Rafitra Rosiana Miray momba ny Famantarana sy ny Fanamarinan'ny fanjakana ary mampiasa izay angona ao anatin'ny pasipaorony ny maro amin'izy ireo mba hisoratana anarana amin'ilay rafitra. Nolazain'i Aleksandr Mikheyev-n'ny IDI, ilay tompon'ny hevitra, tamin'ny gazety Izvestia fa ho an'ireo haino aman-jery mpampita vaovao dia an-tsitrapo ilay rafitra.
Tianay omena ireo mpamaky ny haba-tranonkalan'ny haino aman-jery ny fahafahana mamantatra ny tenany amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy na amin'ny alàlan'ny vavahadin-tseraseran'ny fanjakana. Natokana ho an'ny fanehoankevitra ihany izany ary an-tsitrapo ho an'ireo haino aman-jery mpampita vaovao.
Noho ny endrika tsy an-tery ananan'ilay politikan'ny ” tena anarana marina” naroso, dia heverina fa mety hifidy ny hitaky mombamomba ny tena (ID) ireo haba-tranonkalam-baovao sasany ( efa misy ny manao sahady, toy ny Rambler&Co ), raha toa ka mijanona amin'ny rafitra misy amin'izao fotoana izao sy hiaritra ny vesatry ny andraikitry ny fanehoankevitra ny sasany. Na tsy an-tery aza anefa izany, dia afaka manova ny fifandraisan'ny mpisera amin'ny aterineto Rosiana amin'ny haba-tranonkalam-baovao ilay politika, indrindra fa raha mitaky ny ID-n'ny mpisera ireo vovonana malaza indrindra.
Ny filoha lefitry ny Kaomisiona momba ny torohay politika ao amin'ny Dumam-panjakana Vadim Dengin, nilaza tamin'ny Izvestia fa noheveriny ho mety hiaro ny tombontsoan'ireo mpanao gazety, izay noheveriny fa mety hiharan'ny “fanakianana tsy mitombina” ny fampidirana ilay firaketana ny anaran'ireo mpisera sy ny fampihenàna ny isan'ny fanehoankevitra tsy misy anarana.
Tokony hiezaka mafy isika hanao izay hahitàna amin'ny fotoana rehetra ny fanamarinana ireo mpisera. Amin'ny fiainana andavanandro, manana pasipaoro ny olona rehetra, ary azon'ny tsirairay aseho na aiza na aiza izany, mety ho tahaka izany ny amin'ny aterineto. Tsy misy na inona na inona atahorana eto. Izany no dingana tsara. Fantatsika tsara izany.
Na izany aza, dia nanontanian'ireo rosiana mpiaro ny zo dizitaly avy amin'ny RosKomSvoboda ny lojikan'ny Dengin ny amin'izay olona mety harovan'ilay fitsipika vaovao sady nasehony ny ahiahiny hoe mety hifanojo aminà sazy mitovy toy ny lamandy, eny fa hatramin'ny fampidirana am-ponja aza, ireo mpisera izay mampahafantatra ny tenany amin'ny fanehoankevitra, araka ny lalàna mifehy ny ” fanoherana ny fihoaram-pefy” izay efa mihatra amin'ireo mpisera amin'ny haino aman-jery sosialy noho ny fandefasana votoaty amin'ny aterineto.
Ankilany, te-ho solontenan'ireo haino aman-jery faly izahay raha toa izy ireo ka tsy ho tompon'andraikitra intsony amin'ireo olona izay tsy misy ifandraisany aminy, sady matetika tsy iraisany ny hevitr'izy ireny. Andaniny kosa, mamela ireo mpisera tsy hana any zo tsy ho fantarina anarana izany, satria, ankoatr'ireo mpandefa hafatra mpanakorontana mahazatra sy ireo “mpankahala”, dia mety hatahotra ny amin'ny fiarovana azy ireo ny olona sasany izay milaza ny heviny, indrindra noho ny lalàna izay mandrakariva tsy mbola manasazy azy ireo araka ny tokony ho izy mifanaraka amin'izay noteneniny.
Nofenoin'ny fitombon'ny isan'ireo mpisera amin'ny aterineto voahenjika noho ireo heloka mifandraika amin'ny fihoaram-pefy ny fitombon'ny ezaky ny governemanta Rosiana hampihenàna ny isan'ireo mpisera tsy milaza anarana ety anaty aterineto. Nanomboka tamin'ny 2011 dia nitombo avo telo heny ny isan'ireo olom-pirenena Rosiana voahenjika araka ny andininy 282 ao amin'ny fehezandalàna famaizana (fandrisihina fankahalàna na fandrafiana, na fanivaivàna ny maha-olona) araka ny tatitra avy amin'ny Foiben'ny Fanavaozana ara-Toekarena sy Politika. Nitombo be ihany koa ny fitoriana araka ny tapany 1 sy 2 amin'ny fehezan-dalàna famaizana 280 ( fiantsoana ny olona ho amin'ny hetsika fihoaram-pefy sy fampisaraham-bazana, ao anatin'izany ny fiantsoana ny olona amin'ny fampiasana haino aman-jery na aterineto). Tondroin'ireo manampahaizana ao amin'ilay Ivontoerana ho ny endrika “manjavozavon” ireo fenitra apetraky ny lalàna no mahatonga ny fitomboan'ireo fehezanteny “mpanohitra ny fihoaram-pefy”, ary nomarihany fa tsy misy lalàna iraisam-pirenena mahalaza mazava tsara ny hevitry ny “fihoaram-pefy” rosiana.